Ngwongwo ụlọ Ikea ji mgbawa ma ọ bụ egbe | Bezzia
Ngwongwo Ikea na -eji mpe akwa ma ọ bụ egbe
Maria onyekwere | 10/09/2021 18:00 | Mee ya n'onwe gị
Okwu ndị dị n'asụsụ Bekee na -apụtawanye na okwu anyị kwa ụbọchị. Na agbanyeghị na anyị amaghị ka esi atụgharị ọtụtụ n'ime ha, anyị na -enwe ike ijikọ ha na otu ọrụ. Ọ na -eme na okwu mbanye anataghị ikike, jikọtara ya na ọtụtụ ndị nwere mgbanwe na mgbanwe ndị n'ozuzu ndị okike na -eme n'ime arịa ụlọ nke nnukwu onye Sweden.
Taa enwere ọtụtụ echiche na ụgbụ iji gbanwee arịa ụlọ Ikea. Ọtụtụ n'ime hacks ngwá ụlọ Ikea dabere na usoro ịchọ mma dị ka ịkpa anụ na nke a. Ma ọ bụ ya arịa ụlọ nwere wicker grid ma ọ bụ cannageHa ghọrọ ihe ejiji n'ihe dị ka afọ anọ gara aga, ike ha agwụbeghịkwa ha.
1 Omume ịkpa anụ
2 Ngwongwo ụlọ Ikea na -ejigide mmiri
2.1 Uwe mkpuchi Ivar
2.2 Billy / Oxberg Ụlọ ahịa akwụkwọ
Omume ịkpa anụ
Anyị ga -alaghachi na 2017 icheta ọganihu nke ngwá ụlọ cannage. Mgbe ahụ, ụwa nke ịchọ mma, mana ọ bụghị naanị ụwa nke ịchọ mma, ka ihe okike, ndị ọrụ nka ... duhiere ọzọ, na ụlọ ọrụ ndị na -emepụta ihe egbughị oge itinye ụdị arịa a n'ime nchịkọta ha.
Mkpọkpọ, dị ka a na -akpọkarị nke a teknụzụ ịkpa isi, kpaliri ọtụtụ ndị nrụpụta imepụta mkpokọta arịa dị iche iche n'afọ ndị na -adịbeghị anya. Ọ naghị eju anyị anya n'ihi na okporo ọkụ rattan a na -enye arịa ụlọ ihe pụrụ iche na ịhụnanya.
Rattan ma ọ bụ wicker grids Ha adọtakwala uche nke onyonyo DIY dị iche iche. A na -ahụkwa ọnụahịa nke arịa ụlọ ndị na -eri nri na -abatakarị, ọtụtụ ndị ahụla n'ụdị ọrụ a naanị ụzọ iji tinye ya n'ụlọ ha. Ma ọ bụ na -arụ ọrụ na ịsa anụ na ịhazi onwe gị site na ihe a na arịa ụlọ na ngwa ụlọ site na ọkọ, dị mfe, ebe ị ga -enwe oge iji nyochaa.
Ngwongwo ụlọ Ikea na -ejigide mmiri
Enwere ọtụtụ ihe eji eme ụlọ Ikea nwere egbe. Anyị, dị ka ọ dị na mbụ, ahọrọla ọkacha mmasị anyị. Anyị mere ya na -atụle ego mbụ nke arịa ụlọ Ikea ka ha wee nwee ike nweta ya na ihe isi ike nke oru ngo a.
Na -arụ ọrụ na cannageDịka anyị kwurula, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, mana ị ga -eburu n'uche ọtụtụ ihe mgbe ị na -eme ya. Dabere n'ịdị ike nke ihe ahụ na ụdị nke ewepụtara ya, ọ nwere ike bụrụ ihe na -atọ ụtọ ịmị ya na mmiri ọkụ iji mee ka ọ dịrị ya mfe ịgbatị ma ọ bụ ịkpụzi ya, dịka ịchọrọ ịkpọ ya. Na mgbakwunye, ọ ga -adị oke mkpa ịhọrọ nrapado ziri ezi n'uche - ọ bụrụ na ị ga -eji nrapado - na -eburu n'uche ma grid na elu nke ịchọrọ ịrapara n'ahụ.
Uwe mkpuchi Ivar
Sistemụ nchekwa IVAR Ọ bara uru nke ukwuu na ọ na -aza mkpa dị iche iche nke ndị ahịa Ikea afọ 50. Osisi siri ike nke a na -agwọghị, ihe okike eke na -adigide ma na -eguzogide nke ị nwere ike lekọta anya site n'itinye mmanụ ma ọ bụ wax, wodrobu Ivar bụ otu n'ime ndị kacha ewu ewu na usoro a. Ọ na -atụ 80x30x83 cm, ọ nwere shelves abụọ ị nwere ike ịkwaga iji megharịa oghere na mkpa gị. Ọ na -efu naanị € 59.
Idozi kaboodu a na -eri anụ dị mfe dịka ọ na -egosi anyị Dezie Septemba na nkuzi gị. Ọ bụ ya bụ onye chọpụtara anyị ohere njikọta a ma mee ya n'ụzọ dị mfe, gluing grid na ọnụ ụzọ nke arịa ụlọ a na ịgbakwunye ụfọdụ aka. Mana ọ bụghị naanị ihe ga -ekwe omume ma a bịa n'ịgbanwe akwa uwe a dịka ị nwere ike ịhụ na foto dị n'elu; Ị nwekwara ike bepụ ụzọ wee jiri nsị dochie akụkụ osisi, si otú a mee ka ị nwee mmetụta ihe dị n'ime kaboodu.
Billy / Oxberg Ụlọ ahịa akwụkwọ
Ikea kwuru nke ahụ sekọnd 5 ọ bụla, a na -ere ụlọ ahịa akwụkwọ Billy ebe n'ụwa. Eziokwu dị egwu na -atụle, na mgbakwunye, na Billy bookshelf nọ na katalọgụ ụlọ ọrụ ahụ kemgbe 1979. Taa ọ ka na -abụ nhọrọ kacha mma maka ndị na -agụ ya, mana ọ bụghị naanị maka ndị na -agụ ya.
Ogwe ndobe nke Billy / Oxberg nwere ọnụ ụzọ iko bụ nnukwu nhọrọ ịbawanye oghere nchekwa n'ụlọ anyị. N'iji 80x30x202 cm, ọ nwere shelves na -agbanwe agbanwe yana nnukwu ikike. Na -agbakwụnye grates na ọnụ ụzọ iko Ọ ga -adịkwa nfe, dịka ị na -ahụ na vidiyo Lone Fox.
N'ezie karịa igwu egwu na nkọwa dị na grid ị nwere ike eji agba iji rụpụta nsonaazụ dị egwu ma ọ bụ na -agbanwe agbanwe na ịchọ ụlọ gị mma. Mgbanwe dị mfe na okpokolo agba nke arịa ụlọ, na -agbanwe ya kpamkpam. Ọ masịrị gị ihe mkpuchi ụlọ Ikea a? Chọpụta ndị a ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » .Chọ Mma » Mee ya n'onwe gị » Ngwongwo Ikea na -eji mpe akwa ma ọ bụ egbe
Prep nri, uru nke ịhazi menu izu ụka